Tuhun ka dhashay in markii Sedaxaad Maxkamada Caalamiga Dib u dhigto Muranka Badda Soomaliya iyo Kenya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Tuhun ka dhashay in markii Sedaxaad Maxkamada Caalamiga Dib u dhigto Muranka...
Tuhun ka dhashay in markii Sedaxaad Maxkamada Caalamiga Dib u dhigto Muranka Badda Soomaliya iyo Kenya
Tallaabada ay maxkamadda ICJ markii saddexaad dib ugu dhigtay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxaa ku jira tuhun badan, waana arrin u baahan iney Dowladda Soomaali ka bixiso faah faahin maangal ah, oo ay Shacabku ku qanci karaan.
Inaan saddexdda jeerba la aqbalin codsiga Soomaaliya, oo mar walba ay maxkamaddu u jawaabeyso hal dhinac ayaa sidoo kale cabsi iyo shaki leh, ma Soomaaliya ayaan diidmo muujin, ma maxkamadda ayaa hal dhinac noqotay, ma dadka na matallaya ayaan aheyn kuwii saxda ahaa mise waxaa jira wax kaloo qarsoon, oo shacabka lagala cabsanayo ?!!.
Waa nasiib daro weyn inuu madaxweyne Farmaajo iyo xukuumadiisa wax horumar ah oo muuqda aysan ku kordhin dacwada Badda, oo ah qadiyad qaran oo masiiri ah .
Arrintu labbo ayey mid noqon kartaa in aaney Dowladdu wax dadaal iyo ahmiyad ah aysan siinin arinka dacwada badda, oo hal dhinac ay shaqadu iska wataan ama iney dowladdu ka waddo howlo qarsoodi ah maxkamadda banaankeeda.Si qadiyadda loogu xaliyo hanaan ka baxsan garsoorka. Haddaba mid ay tahayba waa ayaan darro waana wax mugdi galineya xaqa iyo xuquuqda umadda Soomaaliyeed.
Maadaama kiiska loo dhigay bisha March 2021, waxaa madaxda Dowladda Federaalka ah la gudboon iney shacabka u daacad warramaan billaha yar ee u dhiman.
Arrintani waa qadiyad Qaran, mana ahan wax ay dhowr qof isku koobi karaan, sidaa darteed waa in dadweynaha Soomaaliyeed loo daacad hadlaa, hadii kale taariikh xumo ayey dadka qaarkiis xambaarsan doonaan. Qofkuna inta uu xafiiska joogo sida hadalkiisa loo fasiranaayo iyo markii uu berri xilka ka tago waa kala nooc, sidaa darteed madaxweyne Farmaajo waa inuusan fursadda iska lumin.
Guud ahaan shacabka Soomaaliyeedna waa iney aad u hubiyaan tallaabooyinkii u dambeeyay ee kiiska Badda. Cabsi xoogleh ayaa noo muuqata mana ahan in la sahashado xaaladdan.
W/Q: Abdikarin Hussein Guled Madaxweynihii hore ee Galmudug.
Previous articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ka burburiyay dad Danyar ah Goobo ay ku Ganacsanayeen
Next articleGabar Nolo sheyda ku weysay iyadoo la Shuminaayo oo Barasha Bulshada la soo dhigay
Ra iisal wasare Kheyre oo sheegay in 2021 ay Doorasha dalka ka dhaceysa
Ra iisal wasare Kheyre oo markii Igu horay ka dhawaajiyey Doorashada in waqtigeeda lagu qabanaayo
Safaarada Soomali ee Dalka Hindiya oo Ganacsi ka sameysay...
Wasiirka Amniga Galmudug oo amar ku Bixiyey in laga Guuro Xarumaha...
Sidee looga Ceeday Maanta Dalka Kenya
Maxay Tahay Damaca Nabad iyo Nolol imsay ku Darsan Doonaan
Gudoomiyahoo here Puntland Dhooba Darood oo ka war Bixiyey Qilaafka...
Magaalada Muqdisho oo laga dareemayo saan saan Colaadeed